अमर नेम्वाङ स्मृति पुरस्कार तीन जना साहित्यकारलाई « Mechipost.com
अमर नेम्वाङ स्मृति पुरस्कार तीन जना साहित्यकारलाई
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०७७, बिहीबार १७:३६
पाँचथर, ८ साउन
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले गाउँपालिकाकाका पूर्वअध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको स्मृतिमा उक्त रु. एक लाख राशीको साहित्यिक पुरस्कार स्थापना गरेको छ ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष नेम्वाङको स्मृतिमा साहित्यिक पुरस्कार स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले यसै वर्षबाट सेहोनाम्लाङ साहित्य समाज पाँचथरसँगको सहकार्यमा पुरस्कार वितरण आरम्भ गर्ने भएको छ । पुरस्कार वितरणका लागि समाजले श्रष्टा छनौट तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रमअनुसार दिवङ्गत नेम्वाङको ६९ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा यहि साउन २३ गते पुरस्कार तथा सम्मान वितरण गरिने भएको छ । गाउँपालिकासँगको परामर्शमा यस वर्ष तीन जना साहित्यकारहरुलाई पुरस्कृत गरिने सेहोनाम्लाङ साहित्य समाजका सचिव राज दिलाञ्जलीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त संस्थाले गठन गरेको तीन सदस्यीय छनौट समितिको सिफारिसअनुसार रु. ५० हजार राशीको अमर नेम्वाङ श्रष्टा सम्मानबाट सुनसरीको धरानका साहित्यकार प्रा.डा. भीम खतिवडा, रु. ४० हजार राशीको अमर नेम्वाङ युवा श्रष्टा पुरस्कारबाट पाँचथरका साहित्यकार मधु केरुङ र रु. १० हजार राशीको अमर नेम्वाङ नवप्रतिभा प्रोत्साहत पुरस्कारबाट फाल्गुनन्द गाउँपालिकाकै मञ्जु नेम्वाङ पुरस्कृत हुनुहुने भएको छ ।
साहित्यकार समेत रहनुभएका नेम्वाङको २०७५ माघ २६ गते आकस्मिक निधन भएको थियो । पाँचथरमा लिम्बू समुदायबाट स्नातकोत्तरसम्मको पढाई पूरा गर्ने पहिलो ब्यक्ति नेम्वाङ गाउँमै बसेर पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहनुभएको थियो ।
उहाँको निधनपछि फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा गत मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन भएको थियो । साहित्यमा उहाँका ‘इको राइटिङ’का अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँका ‘सम्झनाका तरेली’, ‘अमेरिका भ्रमणका सम्झनाहरु’, ‘एउटा साँझको अवशान’ लगायत कृतिहरु प्रकाशित छन् ।
नेम्वाङको वि.सं. १९९८ सालमा पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–३ पौवासारतापमा बुवा नयेन्द्रराज नेम्बाङ र आमा श्रीहाङ्मा नेम्बाङको कोखबाट जन्म भएको थियो । भारतको दार्जिलिङमा समेत अध्ययन गर्नुभएका नेम्वाङले २०२५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गर्नुभएको थियो ।
उच्च शिक्षा हाँसिल गरेपनि गाउँमै बस्नुभएका उहाँ २०३३ सालमा तत्कालीन चिलिङ्दिन गाउँ पञ्चायतको अधयक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ निरन्तर जनप्रतिनिधि एवम् सामाजिक अगुवाको रुपमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । केही समय अमेरिकामा समेत बसोबास गर्नुभएका नेम्वाङ गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेद्वार भई गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
फाल्गुनन्द गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्तब्य राख्ने क्रममा अचानक बेहोस हुनुभएका उहाँको सोही दिन निधन भएको थियो । उहाँलाई नेपाल सरकारले २०७५ मा सुप्रवल जनसेवाश्री पदकले बिभुषित समेत गरेको थियो ।